अमेरीका एनआरएनका पदाधिकारीको नाङगो नाच, पत्रकार सच्चिको प्रतिकार ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
अमेरीका एनआरएनका पदाधिकारीको नाङगो नाच, पत्रकार सच्चिको प्रतिकार ?
फेसबुक स्टाटसमा कस्ले के भने ?
प्रकाशित मिति २७ माघ २०७५, आईतवार १४:०३ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । प्रवासी नेपाली अर्थात नेपाली मुलका अमेरीकनहरुको संस्था एनआरएनमा सदस्यताको विषयमा सामाजिक संजालहरुका भिता नराम्रोसँग पोतिएका छन । नेपालबाट अमेरीकामा बसोवास गर्ने नेपालीहरुले हामि नेपाली हौं भन्न पनि संकोच लाग्ने अवस्था र्सिजना भएको छ । एनआरएन अमेरीकाका पदाधिकारीहरुलाई विगतदेखि लाग्दै आएको आरोपको उनीहरुका जावो सदस्यता लिने विषयले लिएको पछिल्लो वादविवादले पुष्टि गरेको छ ।
पत्रकार सच्चि मैनालीले पछिल्लो पटक एनआरएन सदस्यता विवादलाई राम्रोसँग अगाडि सारेकि छन । उनले अमेरीकामा वासोवास गर्ने नेपालीबाटै हेपिएका र चेपिएका नेपालीहरुको लागि संजिवनी मुठी नै भएर निस्केकि छन । सच्चि मैनाली लेख्छीन, अघिल्लो पटक डिपोर्ट गरिदिनेसम्म धम्कि पाउनुभएका सामाजीक अभियन्ता ले आज उहॉले लेखेको तल शेयर गरीएको स्टाटस नमेटे मुद्दा हाल्ने थप धम्कि खानुभयो एनआरएन अमेरिकाका पदाधिकारीबाटै ।
“ए बाबा देखेको, भोगेको र लागेको बोल्दा पनि यस्ता धम्कि खेप्नु पर्ने ? कस्तो बिडम्बना ?”
“अघिल्लो पटक खाएको धम्किको बिषयमा सप्रमाण कार्यसमितिका बिभिन्न पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गराउँदा पनि हाल सम्म कुनै सुनुवाई भएको छैन । कस्तो प्रवृति अनि संस्कार स्थापित गर्दैछौं हामी हाम्रो साझा भनिने संस्थामा भनेर देवराज न्यौपानेको भनाइ सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गरेकि छन ।”
“संस्थामा भएका कमीकमजोरीहरूको आलोचना गर्नु, सुझाव दिनु भनेको संस्था सुधार्न चाहनेले नै हो । चॉसो नहुनेले त यहि स्टाटस हेरेर पनि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात? भनेझै कति काम नपाएका यिनिहरूले खाली एनआरएनको कुरा गर्छन् भन्छन् होला ।”
‘आम मानिसहरूले चॉसो देखाउँदा पनि यहॉहरू मुद्दा हाल्ने धम्कि दिनुहुन्छ फेरी चॉसो राखेनन् भनेर “मेम्वरसीप ड्राइभ” गर्नकै लागी हजारौं हजार डलर खर्चेर दौडाहा गर्नुहुन्छ । हामीले गर्ने चॉहिं के हो त ?’ भनेर उनले एनआएनका पदाधिकारीहरुलाई प्रश्न पनि गरेकि छन ?
‘तपॉईंहरूकै बिभिन्न हरकतहरूले आम मानिसको संस्था प्रति बढेको बितृष्णालाई अझै बढावा नदिनुहुन अनुरोध गर्न चाहन्छौं । संस्थालाई माया गर्नेले संस्थाको हितमा बोलेका कुराहरूलाई संस्थाका पदाधिकारीहरूले आत्मसात गरे मात्रै सबैलाई समेट्न सकिएला । होईन भने एनआरएनलाई किन साझा संस्था भन्ने ? कसैको भातृसंगठन भने भै गोनी ।’ भनेर पत्रकार मैनालीले दिक्दारी पनि पाेखेकि छन ।
“छरिएर पोखिएका मात्रै होईन बिभिन्न गलत कुराहरूलाई खोजी खोजी समेत खवरदारी गर्ने हाम्रो आफ्नो धर्म मान्ने आदरणीय पत्रकार ज्जूहरू कृपया यस्ता बिषयहरूलाई गम्भीर भई सम्बोधन गरिदिनुहोला र पत्रकारको आफ्नो धर्म निभाउन नचुक्नुहोला । आगे यहॉहरूकै मर्जी ? पत्रकारहरूसँग अनुनय विनय पनि पत्रकार मैनालीले गरेकि छन ।
नोटः आवश्यक परेमा प्रमाणको लागी सम्पर्क गर्नुहोला ।एनआरएनको सदस्यता बनौं र
यसै गरि एनआरएन अमेरीकाको सदस्यताकै विषयमा देवराज न्यौपानले यस्तो फेसवालमा स्टाटस लेखेका छन , एनआरएनको सदस्यता बन्नु हुन्न जबसम्म डाटा लिक हुने र धाँदली हुने संका निवारण गरिदैन, सदस्यता नलिएरै एनआरएन सुधार्न दवाव दिने हो भन्ने खालका दुबै कोणबाट आवाजहरु जोडदार रुपमा आईरहेका छन् । म चैं भन्छु यो सब सम्भावना छ र यसका बाबजुद पनि मलाई चैं मेरो ब्यक्तिगत नोक्सानी भन्दा मेरो एनआरएन नैं प्यारो छ । त्यसैले सदस्य बनि पनि सकेको छु साथै अरुलाई पनि बन्न आग्रह गर्दछु । तर सदस्यता लिनेहरुले म जस्तै यसको रिस्क आफैं बेयर गर्नेगरी लिनुहोस् । जसरी हामी जति पनि अनलाईन कामहरु हरेक दिन जसो रिस्क लिएरै गरिरहेका हुन्छौं । यिनले हाम्रो डाटा लिने हुन् ज्यान त लिदैनन् नि ? धाँदली गरेर जित्नु पर्नेलाई हराउलान् र आफ्नो टिमलाई जिताउलान् त्यति त हो यिनले गर्न सक्ने ? एनआरएन हाम्रो प्यारो संस्था कप्लक्क खान चपाउन र पचाउन त अलिक गाह्रै पर्ला नि ? मानिसहरु जागरुक हुँदैछन् अर्थात उज्यालोको संकेत प्रस्ट देखा पर्दै गर्दा स्यालहरु सुईकुच्चा ठोक्ने सुरसार कस्दैछन् १ यो हाम्रो जागरुकता नरोकियोस् बस् “अब हाम्रो एनआरएन, राम्रो एनआरएन” बन्नबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन ?
हामी जस्तो सदस्यता लिनुस् भन्दै हिड्नेहरुले संका गरिए जस्तो केही हुदैन भनेर ग्यारेन्टी लिनु पर्ने कि नपर्ने ? यो प्रश्न पनि अहिले गम्भीर रुपमा उठेको छ१ पत्रकार सच्चि मैनालीले अन्तर्वार्तामा म लगायत अरुलाई पनि यो प्रश्न तेर्स्याउनु भएको छ । हामी जस्तो सर्वसाधारण जसको कुनैं पहुँच र एक्सेस छैन कसरी यस कुराको ग्यारेन्टी लिने ? आफ्नो संस्थालाई मायाँ गर्नु र सदस्यता लिने जस्तो अधिकारको उपयोग गर्नु कसरी अनैतिक होला ? तैपनि यी सब कुराहरुको पर्वाह नगरिकन म भन्छु संस्था जोगाउन सदस्यता लिनुहोस् ? म ब्यक्तिगत रुपमा यसको कुनै ग्यारेन्टी लिन सक्दिन किनभने सबै गतिविधिहरु हेर्दा र एक हप्ता बाँकी रहदा तीन लाखमा तीन हजारले पनि सदस्यता नलिएको अबस्थामा म भन्छु, चुनाव र सदस्यता लिने समय सारियोस् र सर्वमान्य सरल र बिश्वासिलो नयाँ सिस्टम लागु गरियोस् ? यसको अब कुनैं बिकल्प म देख्दिन ? अझ पनि जवर्जस्ती गर्नु भनेको घातक हुनेछ । समयमा समाधान खोज्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
यहाँ सबभन्दा ठूलो संकाको कारण त यो हो कि जे पनि गर्न सकिने अनलाईनको एक्सेस तिनैं मानिसहरुले आफैंसित राखेका छन् जसले हिजो नांगो धादलीपूर्ण हर्कत गरेका थिए भन्ने आरोप लागेको छ । अझै पनि म भन्छु सुधारिएको एनआरएनको हामीसित कुनैं बिकल्प छैन र यसका लागि म आफु पनि तपाईहरुसँगै सधैं लडिरहनेछु । यस्ता खालका वादविवाद सार्वजनिक हुदाँ एनआरएन केन्द्र वोल्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन ? एनआरएन एउटा देशमा विवाद हुँदा एनआरएन केन्द्र र प्रवासी संगठन विश्वकै अपमान र वैज्जती हैन र ?
काठमाडौं। शहीद गंगालाल श्रेष्ठका छोराको आज (मंगलबार) विहान निधन भएको छ ।
शहीद गंगालालका छोरा शशीलाल श्रेष्ठको ७८ वर्षको उमेरमा…
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति आफ्नै पार्टीभित्रबाटै आलोचना सुरु भएको छ । दुई तिहाई बहुमतसहितको…
अधिवक्ता झा प्रदेश २ को मुख्य न्यायाधिवक्ता
काठमाडौं । प्रदेश २ को मुख्य महान्यायाधिवक्तामा अधिवक्ता दीपेन्द्र झा नियुक्त भएका छन्।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल…
–पीपीसी उत्पादन गरेर ओपीसी भन्दै बिक्री
–बोकाको टाउको राखेर बाख्रीको मासु बेचेजस्तै
–ब्रान्ड एम्बेसडर हमाललाई समेत विवादमा पारियो
पर्साको वीरगन्जमा रहेको…
सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।…